‘Ny zo dizitaly ao anaty firindrinana’: Tetikasa vaovao ho an’ny habaka nomerika Afrikana · Global Voices teny Malagasy
‘Ny zo dizitaly ao anaty firindrinana': Tetikasa vaovao ho an'ny habaka nomerika Afrikana
Mpanoratra Amanda Lichtenstein, Dercio Tsandzana, Nwachukwu Egbunike Nandika Liva Andriamanantena
Voadika ny 02 Desambra 2020 5:07 GMT
Nandritra izay sivy volana lasa izay, niteraka andiana fepetra fahamehana hifehezana ny fihanaky ny viriosy ny valan'aretina COVID-19 aty Afrika. Nandritra izany fotoana izany dia nanararaotra ity areti-mifindra ity ny governemanta sasany hifehezana ny zo an-tsivalo, izay nahatonga ny “fiparitahan'ny” fanodikodinam-baovao sy ny fandisoana vaovao momba ny COVID-19.
Nanomboka tetikasa vaovao mifantoka amin'ny fanaraha-maso ny tatitra mikasika ny COVID-19 sy ny fiantraikany amin'ny habaka an-tsivalo Afrikana nandritra ny valan'aretina ny Global Voices. Natomboka tamin'ity volana ity ary hifarana amin'ny volana Febroary 2021 ilay tetikasa, nomena anarana hoe “Ny zo nomerika ao anaty fihibohana: Ny fanaraha-maso ataon'ny governemanta momba ny tatitra mikasika ny COVID-19 any Afrika”.
Mpanangom-baovao miisa sivy no hanao fanadihadiana momba ny fandrahonana amin'ny fahalalahana maneho hevitra mandritra ny COVID-19 amin'ny habaka dizitaly Afrikana, hijery ny fomba firoborobon'ny fifaninanana mitantara ny COVID-19 amin'ny aterineto ary hijery akaiky ireo fomba nitantanan'ny governemanta ny valan'aretina hamoretana ny zon'ny olom-pirenena.
Hiara-hiasa amin'ireo mpanao gazety miisa sivy izay hamokatra tantara any amin'ireto firenena manaraka ireto: Alzeria, Namibia, Ethiopia, Mozambika, Tonizia, Oganda, Tanzania, Zimbaboe ary Nizeria ilay tetikasa tarihin'i Amanda Lichtenstein, Nwachukwu Egbunike ary Dercio Tsandzana, miaraka amin'ny ekipa Afrika Atsimon'i Sahara.
Ny tatitra ôrizinaly dia hanasongadinana ny fanitsakitsahana ny zo an-tsivalo indrindra nandritra ny valan'aretina; ny fanodikodinam-baovao momba ny fitantaran'ny governemanta Afrikana ny coronavirus izay niantraika tamin'ny zo dizitaly; ary ny fanitarana sy ny fiezahan'ny governemanta hitrandrahana ny valan'aretina coronavirus hampiharana ny “fanjakan'ny fahamehana” izay nametra ny zo an-tsivalo.
Handray anjara amin'ny fivoriam-piofanana roa izay manasongadina fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanaovana tatitra ara-pahasalamana manerantany ireo mpanao gazety miisa sivy. Hadika amin'ny fiteny eo an-toerana ary avoaka amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny fitantaran'izy ireo.
Famerenana vaovao ny tetikasa teo aloha natomboka tamin'ny taona 2019 izay mifantoka amin'ny zo nomerika aty Afrika “Ny zo dizitaly ao anaty firindrinana”, toy ny “Writing toward freedom: Politics and digital rights in Africa,” sy ny “The identity matrix: Platform regulation of online threats in Africa,” izay samy novatsian'ny Fiaraha-miasa amin'ny Politikan'ny Teknolojia Iraisam-pirenena any Afrika Atsinanana sy Atsimo (CIPESA).
Dia mirary ny tsara indrindra ho an'ny ekipa izahay ary maniry hamaky ny tantara tsy ho ela!